Madaxweynaha dalka Honduras Porfirio Lobo oo ku baaqay in baadhitaan buuxa lagu sameeyo dabkii qabsaday xabsi ku yaalla dalkaasi. – Radio Daljir
Madaxweynaha dalka Honduras Porfirio Lobo oo ku baaqay in baadhitaan buuxa lagu sameeyo dabkii qabsaday xabsi ku yaalla dalkaasi.
Tegucigalpa,Feb 16 -Madaxweynaha dalka Honduras Porfirio Lobo ayaa balanqaaday in baadhitaan buuxda oo cad lagu samayndoono dab qabsaday xabsi ku yaalla dalkaasi, oo ay ku dhinteen 350 maxbuus.
Mr Lobo ayaa sidoo kale shaqadii ka hakiyey saraakiishii xabsiyada ee heer qaran iyo heer degaamo ,illaa baadhitaan buuxa lagu sameeyo masiibada ka dhacday xabsiga Comayagua.
Maxaabiis farabadan ayaa gubtay ama naqaskii ku dhegay ,iyagoo ku jira qolalka xabsiga , islamarkaana arintaasi u dhintay.
Ururka Human Rights Watch ayaa sheegay in masiibadani ay ka turjumayso sida ay buux ?dhaafeen xabsiyada dalkaasi Honduras.
Maamulayaasha dalka Honduras ayaa isku dayaya in ay ogaadaan waxa sababay dabkaan ka kacay xabsiga, waxana illaa iyo imika lakala garankarin in dabka ay sababeen maxaabiista ama uu ka kacay koronto.
Dadka ay ehelka ahaayeen maxaabiistan ayaa waxa ay isku dheceen ciidamada ammaanka ,markii ay doonayeen in ay galaan dhismaha xabsiga si ay war uga helaan dadkii ay jeclaayeen.
Xabsiga uu dabku ka kacay ee Comayagua ayaa 100km waqooyiga kaga aadan magaalada caasimadda u ah dalka Honduras ee Tegucigalpa.